Aza atao an-keriny amin'ireto dingana 3 ireto | Avy amin'ny Linux | ChrisADR | Avy amin'ny Linux
Aza atao voajirika amin'ireo dingana 3 ireo
ChrisADR | | Tutorials / Manuals / Tips
Hatreto dia heveriko fa tsy nanohina ny iray amin'ireo hira tiako indrindra aho, Security rafitra, ary mino aho fa io no ho lohahevitra nolazaiko taminao androany 🙂 Manantena aho fa aorian'ity lahatsoratra fohy ity dia afaka manana hevitra tsara kokoa ianao momba izay afaka manampy anao hifehezana tsara kokoa ny risikao sy ny fomba hanalefahana ny maro amin'ny fotoana iray.
1 Loza na aiza na aiza
2 Karazana fepetra
2.1 Manalefaka azy
2.2 Alefaso izany
2.3 Ekeo izany
3 Mba hitazomana ny daty
4 Mieritrereta toy ny milina fa tsy toy ny olombelona
4.1 Ahoana no fomba hieritreretako toy ny masinina?
Loza na aiza na aiza
Tsy azo ihodivirana izany, amin'ity taona ity fotsiny, dia efa mihoatra ny 15000 ny fahalemena hita sy voatendry amin'ny fomba iray isika -bahoaka. Ahoana no ahalalako? Satria anisan'ny asako ny mijery ireo CVE ao amin'ireo programa ampiasainay ao Gentoo hahitana raha toa ka mihazakazaka rindrambaiko marefo isika, amin'ity fomba ity dia afaka manavao azy io izahay ary manome antoka fa manana fitaovana azo antoka ny tsirairay amin'ny fizarana.
Fahasamihafana iombonana sy fanamafisana Ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy, dia izy ireo no mpampahafantatra tokana izay omena ny fahalemena misy. Azoko atao ny milaza am-pifaliana lehibe fa misy mpikaroka Gentoo marobe manohana ny soa ho an'ny olombelona, ​​manadihady ary mamoaka ny zavatra hitany mba hahitsian'izy ireo sy ahitsy. Ny iray amin'ireo tranga farany nahafinaritra ahy namaky dia ny an'ny Optionsbleed; fahalemena iray izay nisy fiantraikany tamin'ny mpizara Apache manerantany. Fa maninona aho no milaza fa reharehako izany? Satria mahasoa an'izao tontolo izao izy ireo, ny tsiambaratelo momba ny faharefoana dia mahazo tombony vitsivitsy ihany, ary ny vokatr'izany dia mety hitera-doza arakaraka ny tanjona.
CNA dia sampana miandraikitra ny fangatahana sy / na fanendrena CVE, ohatra, manana ny CNA an'i Microsoft izahay, miandraikitra ny fanangonana ireo marefo azy ireo, famahana azy ireo ary fanendrena azy ireo CVE ho an'ny fisoratana anarana taty aoriana rehefa mandeha ny fotoana.
Andao atomboka amin'ny fanazavana fa tsy misy fitaovana azo antoka na ho azo antoka 100%, ary ho toy ny fomba fiteny mahazatra mahazatra milaza hoe:
Ny solosaina tokana azo antoka 100% dia ilay mihidy ao anaty vault, tafasaraka amin'ny Internet ary maty.
Satria marina izany dia ho eo foana ny risika, fantatra na tsy fantatra, fotoana fohy fotsiny io ka manoloana ny risika dia afaka manao izao manaraka izao isika:
Ny fanalefahana loza dia tsy inona fa ny fampihenana azy (NO override). Ity dia teboka iray lehibe sy manandanja na eo amin'ny sehatry ny fandraharahana na ny an'ny tena manokana, tsy te ho «hacked» ny olona iray, fa ny milaza ny marina ny teboka malemy indrindra amin'ny rojo dia tsy ny solosaina, na ny programa, na ny fizotrany aza, dia ny olombelona.
Isika rehetra dia manana fahazarana manome tsiny ny hafa, na olona izy ireo na zavatra, fa amin'ny fiarovana ny solosaina dia ny olombelona no tompon'andraikitra andraikitra, mety tsy ianao no mivantana, fa raha tsy manaraka ny làlana tsara ianao dia ho lasa ampahany amin'ny olana. Aorian'izay dia homeko tetika kely ianao mba hiarovan-tena bebe kokoa 😉
Ity dia fitsipika malaza, tsy maintsy eritreretintsika ho a Banco. Rehefa mila mikarakara ny volanao ianao (ny tiako holazaina ara-batana) ny zavatra azo antoka indrindra dia ny avelanao any amin'ny olona manana fahaizana miaro azy tsara lavitra noho ianao. Tsy mila manana ny vault-nao manokana ianao (na dia mety ho tsara lavitra aza) vao afaka mikarakara zavatra, mila manana olona (matoky anao) hitazona zavatra tsara kokoa noho ianao ianao.
Fa rehefa tsy mihatra ny voalohany sy faharoa dia eo no mipetraka ny fanontaniana tena manandanja. Ohatrinona no sarobidy amiko /? Raha betsaka ny valiny dia tokony hoeritreretinao ireo roa voalohany. Fa raha ny valiny dia a tsy dia be loatraAngamba tokony hanaiky ny risika fotsiny ianao.
Tsy maintsy miatrika izany ianao, fa tsy ny zava-drehetra dia mora entina, ary ny zavatra mora azo dia mitaky vola be dia be ka tsy azo atao ny mampiditra vahaolana tena izy raha tsy mila manova sy mandany fotoana sy vola be ianao. Fa raha azonao atao ny mamakafaka izay ezahanao harovana, ary tsy hitany ny toerany amin'ny dingana voalohany na faharoa, dia raiso amin'ny dingana fahatelo amin'ny fomba tsara indrindra izany, aza omena lanja bebe kokoa noho izy, ary aza afangaro amin'ny zavatra tena misy lanjany.
Mba hitazomana ny daty
Fahamarinana izany izay afa-mandositra olona sy orinasa an-jatony. Ny fiarovana ny solosaina dia tsy ny fanarahana ny fanaraha-maso ataonao in-3 isan-taona ary ny fiandrasana zavatra tsy hitranga ao anatin'ny 350 andro hafa. Ary marina izany ho an'ny mpitantana ny rafitra maro. Afaka nanamarina ny tenako ihany aho tamin'ny farany LFCS (Avelako ho anao hahitako ny toerana nanaovako azy 🙂) ary teboka mitsikera izany mandritra ny fampianarana. Ny fitazonana ny fitaovanao sy ny fandaharam-potoany dia zava-dehibe, zava-dehibe, hisorohana ny loza mety hitranga. Azo antoka fa maro eto no hilaza amiko, fa ny programa ampiasainay dia tsy mandeha amin'ny kinova manaraka na zavatra mitovy amin'izany, satria ny marina dia baomba mandahatra ny programa ataonao raha tsy mandeha amin'ny kinova farany ity. Ary izany dia mitondra antsika any amin'ny fizarana teo aloha, Azonao atao ve ny manalefaka azy?, Azonao afindra ve?, Azonao ekena ve izany? ...
Lazaina ny marina, mba hitazomana azy ao an-tsaina fotsiny, ny 75% amin'ny fanafihana fiarovana amin'ny solosaina dia avy ao anatiny. Mety ho noho ianao manana mpampiasa tsy miahiahy na manisy ratsy olona ao amin'ny orinasa. Na tsy nanasarotra an'izany ny fizotrany fiarovana a mpijirika miditra ao amin'ny tranonao na tamba-jotra. Ary saika maherin'ny 90% ny fanafihana dia ateraky ny rindrambaiko efa lany daty, tsy misy noho ny faharefoan'ny andro aotra.
Mieritrereta toy ny milina fa tsy toy ny olombelona
Ity dia torohevitra kely avelako anao eto:
Mieritrereta toa ny milina
Ho an'ireo izay tsy mahatakatra dia manome ohatra iray aho izao.
Mampahafantatra anao aho John. Anisan'ireo tia filaminana izy io dia iray amin'ireo teboka fanombohana tsara indrindra rehefa manomboka eo amin'ny tontolon'ny fanapahana etika. John mifanerasera mahafinaritra amin'ny namantsika izy crunch. Ary amin'ny ankapobeny dia mandray lisitra natolotra azy izy ary manomboka mandinika ireo fitambarana mandra-pahitany lakile mamaha ny teny miafina tadiaviny.
Crunch dia mpamorona fitambarana. Midika izany fa azonao atao ny miteny crunch fa mila teny miafina izay manana litera 6 ianao, misy litera ambony sy ambany ary crunch dia hanomboka hizaha tsirairay ... zavatra toy ny:
Ary hanontany tena izy ireo hoe haharitra hafiriana ny fandalovana ilay lisitra iray manontolo azo antoka ... tsy mihoatra ny vitsivitsy izany minitra. Ho an'ireo izay tavela hisoka-bava, avelao aho hanazava. Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny rohy malemy indrindra amin'ny rojo dia ny olona, ​​ary ny fomba fisainany. Ho an'ny solosaina dia tsy sarotra ny manandrana mitambatra, zavatra miverimberina io, ary nandritra ny taona maro dia lasa natanjaka tokoa ireo mpandrehitra ka tsy mila mihoatra ny iray segondra ny fanandramana arivo, na mihoatra aza.
Fa izao ny zavatra tsara, ny ohatra teo aloha dia ny fisainan'olombelona, izao isika dia mitady izany milina fisainana:
Raha miteny crunch isika mba manomboka mamorona teny miafina amin'ny rariny fotsiny 8 tarehimarika, ao anatin'ny fepetra takiana teo aloha ihany, dia nandeha hatramin'ny minitra vitsy ka hatramin'ny ora. Ary eritrereto hoe inona no hitranga raha miteny aminao izahay mba hampiasa mihoatra ny 10, dia lasa izy ireo andro. Mandritra ny 12 mahery dia efa tafiditra isika volanaHo fanampin'ny zava-misy fa ny lisitra dia ho an'ny refy tsy azo tehirizina amin'ny solosaina mahazatra. Raha tonga amin'ny 20 isika dia miresaka zavatra izay tsy ho vitan'ny solosaina afaka an-jatony taona maro (miaraka amin'ireo mpikirakira ankehitriny mazava ho azy). Ity dia misy ny fanazavany matematika, fa noho ny habaka dia tsy hanazava azy eto aho, fa ho an'ny be te hahafanta-javatra dia misy ifandraisany amin'ny permutation, ny mitambatra ary ny tsikombakomba. Ho marimarina kokoa, miaraka amin'ny zava-misy fa isaky ny litera ampiantsika ny halavany dia efa ho 50 isika fahafaha-manao, noho izany dia hanana zavatra toy izany isika:
20^50 fitambarana mety ho an'ny tenimiafintsika farany. Ampidiro ao amin'ny calculatoranao io isa io hahitanao ny habetsaky ny mety ho fatra misy ny marika 20.
Ahoana no fomba hieritreretako toy ny masinina?
Tsy mora izany, mihoatra ny olona iray no hilaza amiko hieritreritra tenimiafina misy litera 20 misesy, indrindra amin'ny foto-kevitra taloha hoe tenimiafina teny lakile Fa andao jerena ohatra iray:
Sarotra amin'ny olona ny mahatadidy izany, fa mora be amin'ny masinina.
Etsy an-danin'izany dia mora be ho an'ny olombelona ny mahatadidy (mampihomehy aza) fa helo ho an'ny crunch. Ary mihoatra ny iray izao no hilaza amiko, saingy tsy tsara ve ny manova ny lakile misesy? Eny, anolorana azy, koa ankehitriny isika dia afaka mamono vorona roa amin'ny vato iray. Eritrereto hoe amin'ity volana ity aho mamaky Don Quixote de la Mancha, volume I. Ao amin'ny tenimiafiko dia hametraka zavatra toy ny:
Simbolo 20, zavatra sarotra hita nefa tsy fantatro, ary ny zavatra tsara indrindra dia rehefa vitako ilay boky (mieritreritra aho fa mamaky tsy tapaka 🙂) dia ho fantatr'izy ireo fa tsy maintsy manova ny teny miafiny izy ireo, ary miova ho:
Fandrosoana izao 🙂 ary azo antoka fa hanampy anao hitandrina ny teny miafinao ary amin'izay dia hampahatsiahy anao hamita ny bokinao ianao.
Izay nosoratako dia ampy, ary na dia tiako aza ny afaka miresaka olana maro momba ny filaminana, avelantsika mandritra ny fotoana hafa 🙂 Miarahaba anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Aza atao voajirika amin'ireo dingana 3 ireo
Penguin dia hoy izy:
Manantena aho fa afaka mampakatra fampianarana momba ny fanamafisana amin'ny Linux, hahafinaritra izany.
Mamaly an'i Penguin
Salama 🙂 tsara, azonao omena fotoana kely ve aho, nefa mizara loharano iray hitako fa tena mahaliana 🙂
Ity iray ity dia tsy adika amin'ny teny espaniola if fa raha misy olona entanina hanome tanana an'io ary hanampy dia ho tsara 🙂
XoX dia hoy izy:
Tena mahaliana, fa raha ny fahitako azy dia manjary lany andro ny fanafihana mahery vaika, ary ny famoronana tenimiafina toa ny "ElQuijoteDeLaMancha1" dia toa tsy vahaolana mety ihany koa, satria satria raha misy injeniera sosialy kely dia azo atao ny mahita ny Tenimiafina amin'ity karazana ity, ny famotopotorana olona fotsiny an'io olona io ary hambarany amintsika, na amin'ny tambajotran-tserasera misy azy, amin'ireo olom-pantany na any am-piasana, dia ampahany amin'ny natioran'olombelona.
Raha ny fahitako azy, ny vahaolana tsara indrindra dia ny fampiasana mpitantana teny miafina, satria azo antoka kokoa ny mampiasa tenimiafina 100 isa noho ny iray 20 isa, ho fanampin'izany misy ny tombony fa amin'ny fahalalana ny tenimiafin'ny tompony fotsiny dia tsy azo atao ny manambara na dia amin'ny tenimiafina noforonina satria tsy fantatra izy ireo.
Ity no mpitantana ny tenimiafiko, loharano misokatra izy ary amin'ny alàlan'ny fakan-tahaka ny fitendry, tsy voaro amin'ny keylogers.
Mamaly an'i XoX
Eny, tsy mody manome vahaolana azo antoka tanteraka aho (tadidiko fa tsy misy 100% tsy azo idirana) amin'ny teny 1500 fotsiny 🙂 (Tsy te-hanoratra mihoatra izany aho raha tsy hoe tena ilaina tokoa) fa araka ny filazanao azy ihany Ny 100 dia tsara kokoa noho ny 20, ary ny 20 dia azo antoka fa tsara kokoa noho ny 8 🙂 ary tsara, araka ny nolazainay tany am-piandohana, ny rohy malemy indrindra dia ny lehilahy, ka eo no hisarika ny saina hatrany. Mahafantatra "injeniera sosialy" marobe izay tsy mahalala firy momba ny haitao aho, fa ny manao consultant fiarovana ihany. Ny tena sarotra dia ny mahita ireo hackers tena izy izay mahita lesoka amin'ny programa (ilay andro tsy fantatra fantatra).
Raha miresaka vahaolana "tsara kokoa" isika dia efa miditra amina lohahevitra iray ho an'ireo olona manam-pahaizana momba io sehatra io, ary mizara amin'ny karazana mpampiasa aho 🙂 fa raha tianao dia afaka miresaka momba ny vahaolana "tsara kokoa" amin'ny fotoana hafa izahay. Ary misaotra noho ny rohy, azo antoka fa misy ny mahatsara sy maharatsy azy, saingy tsy hahomby amin'ny mpitantana teny miafina koa izany, ho gaga ianao amin'ny fahamoranana sy ny faniriana hanafihan'izy ireo azy ireo, ... ... fandresena tokana midika hoe fanalahidy maro nambara.
Anasasis dia hoy izy:
Lahatsoratra mahaliana, ChrisADR. Amin'ny maha-mpandrindra ny rafitra Linux anao dia fampahatsiahivana tsara izany mba tsy ho variana amin'ny tsy fanomezana azy ny zava-dehibe indrindra ilaina anio mba hitazomana ny teny miafina sy ny fiarovana takian'ny andro ankehitriny. Na io aza dia lahatsoratra iray izay mety handeha lavitra amin'ny olon-tsotra izay mieritreritra fa tsy ny teny miafina no antony 90% ny aretin'andoha. Te-hahita lahatsoratra misimisy momba ny fiarovana ny solosaina aho ary ny fomba hitazomana ny fiarovana avo indrindra azo atao ao anatin'ny rafitra fiasa malalantsika. Mino aho fa misy zavatra bebe kokoa ianarana mihoatra ny fahalalana azon'ny olona amin'ny alàlan'ny fampianarana sy fiofanana.
Ankoatra izay dia dinihiko foana ity bilaogy ity raha te hahalala momba ny programa vaovao iray ahafahan'ny Gnu Linux mandray an-tanana izany.
Valiny ho an'i Anasasis
Azonao atao ve ny manazava kely amin'ny antsipiriany, miaraka amin'ny isa sy isa, maninona ny "DonQuijoteDeLaMancha1" ("DonQuijote de La Mancha" tsy misy; p) dia azo antoka kokoa noho ny "• M¡ ¢ 0nt®a $ 3Ñ @ •"?
Tsy mahalala na inona na inona momba ny matematika kombinatorialy aho, saingy mbola tsy resy lahatra amin'ilay hevitra miverimberina matetika fa ny teny miafina lava miaraka amina endri-tsoratra tsotra dia tsara kokoa noho ny fohy kokoa miaraka amina endri-tsoratra lehibe kokoa. Ny habetsaky ny fangaro azo atao ve dia tena lehibe tokoa amin'ny fampiasana litera sy tarehimarika latina noho ny fampiasana ny UTF-8 rehetra?
Salama Dani, andao andramana hizaha azy ... efa mba nanana iray tamin'ireo valizy ireo niaraka tamin'ny isa mitambatra ve ianao? Andao hojerentsika ity tranga manaraka ity ... raha heverina fa mahatratra sivy dia manana zavatra toy izany isika:
Ny tsirairay dia samy manana ny kemungkinan diaz, koa raha te hahalala ny isan'ny fangaro azo atao ianao dia mila manao fampitomboana tsotra fotsiny, 10³ mba ho marina na 1000.
Ny latabatra ASCII dia ahitana tarehintsoratra 255 tena ilaina, izay ampiasainay matetika ny isa, ny ambany, ny ambony ary ny mari-piatoana. Eritrereto hoe izao dia hanana tenimiafina 6 isa miaraka amin'ny safidy 70 isika (sora-baventy, sora-baventy, isa ary marika vitsivitsy)
Araka ny azonao an-tsaina, isa be dia be izy io, 117 649. Ary ireo rehetra ireo no mety ho fitambarana misy amin'ny toerana manan-danja 000 isa. Ankehitriny dia hampihena bebe kokoa ny halaviran'ny fahafaha-manao isika, andao hitohy fa hampiasa 000 fotsiny isika (litera kely sy isa ary marika indraindray) fa amin'ny teny miafina lava kokoa dia ndao atao hoe 6 isa (Izay ananan'ilay ohatra toy ny 45).
Ny isan'ny azo atao… 1 159 445 329 576 199 417 209 625 244 140 625… Tsy haiko ny manisa an'io isa io, fa ho ahy kosa somary lava kokoa izy ity :), saingy hataonay bebe kokoa aza ny hampihena azy, hampiasa fotsiny izahay isa 0 ka hatramin'ny 9, ary andao jerena izay mitranga amin'ny habetsahana
Amin'ity fitsipika tsotra ity dia afaka mamorona mitambatra 100 mahavariana ianao :). Izany dia satria ny isa tsirairay nampiana ny fampitoviana dia mampitombo ny isan'ny fahafaha-mitrandraka be loatra, raha mampitombo kosa ny fahafaha-manao ao anaty boaty tokana dia mampitombo azy io hatrany.
Fa izao isika dia mankany amin'ilay "tsara indrindra" ho antsika olombelona.
Mandra-pahoviana no hanoratanao ny "• M¡ ¢ 0nt®a $ 3Ñ @ •" amin'ny teny azo ampiharina? Andao hieritreritra iray segondra fa tsy maintsy soratanao isan'andro, satria tsy tianao ny mitahiry azy amin'ny solosaina. Lasa asa mandreraka izany raha tsy maintsy atao mifanintona tanana amin'ny fomba tsy mahazatra. Haingana kokoa (raha ny fijeriko azy) dia ny manoratra teny azonao soratana voajanahary, satria lafin-javatra lehibe iray hafa ny fanovana tsy tapaka ny lakile.
Ary farany nefa tsy azo odiantsy ... Miankina betsaka amin'ny fihetsiky ny olona izay nampivelatra ny rafitrao, ny fampiharana, ny programa, afaka mampiasa am-pitoniana ny litera UTF-8 REHETRA, amin'ny tranga sasany dia mety hanakana ny fampiasana ilay Manisa izany satria "manova" ny tenimiafinao ny rindranasa ka mahatonga azy tsy ho azo ampiasaina intsony ... Ka angamba tsara kokoa ny milalao azy soa aman-tsara amin'ireo tarehintsoratra fantatrao foana fa misy.
Manantena aho fa hanampy amin'ny fisalasalana izany 🙂 Arahaba
Fandaharana: Ny Psychology an'ny Solosaina